RefIne Color TECH Co., Ltd. yakatangwa muna 2015, Icho chitsvakurudzo nekufambisa, kugadzirwa, kutengesa uye mushure mekutengesa basa seimwe yekambani. Zvinhu zvakakosha: zvidzitiro uye zviduku zvinyorwa zvepa flatbed, zvakakwana zvakakwana LED UV flatbed printer, printer nemamwe mavara. Iyo midziyo inogona kushandiswa muT-shati, foni yefoni, zvokudya, matanda, dombo, shangu, machira, simbi, girazi, kristini, acrylic, PVC, ABS, TPU nezvimwe zvinhu zviri pamusoro pevara rekunyora, digita yekunyora kushandiswa kwezvikwata zvakasiyana-siyana advanced. Company R & D uye kugadzirwa kwepasi rose printer, flatbed printer inotora digital programming, yakajeka infrared scanning, multi-position sensor uye yakakwirira zvakajeka, kuve nechokwadi kuti printer performance inogadzikana uye yakanyatsogadzirisa nzvimbo!
Dzorera chigadzirwa chedu pasi apa:
1. RF-A3UV / RF-A4UV inorudzi rwe "kusasangana" yejet type yemhando yedhijidhi, sarudzo yacho yakazara kwazvo. Kushandisa zvigadzirwa zvinotsigira ivha yeUni, pamwe nechemberi haigone kudhinda, inenge yose yezvimwe zvinhu (chifukidziro chefoni, chikwata, zviratidzo, mabhokisi matsvuku, simba rekushandisa, flash memory disk, KT board, dombo, silica gel, matanda, ceramic, kristini, acrylic, PVC, ABS nezvimwewo) zvinhu zvinogona kuva magirazi ekudhinda, kupera nekunyatsodzivirira, kupfeka kupfeka, kupikisa kupera. Kuti uwane pfungwa yechokwadi yechisimbiso, kwete ndiro, spray yakaoma, mufananidzo wakakwana wemufananidzo.
2. Kushanda kwakaoma coffee / cake printer neki inodyiwa yakagadzirwa sechinhu chinoshandiswa pakushandura nekodzero yekudhinda musoro, yakagadzirirwa kune vatengesi vekupinda nepamusoro uye nekutengesa kofi. Kushanda kwakajeka, yakakwirira kudhinda nekudhinda uye
Mari shoma ichaita kuti vatengi vakawanda vauye. Ichaita kuti uwedzere kukosha kwako.
3. RF-A3 Flatbed Printer inokwanisa kudhinda pamasikati, matsvuku, machena uye chero mararamiro T-Shirts, nezvimwe zvinhu, mavara-mavara pasina shiniki yekasiki uye ndiro yekudhinda. Inogona kukwanisa kudhinda mavara machena, mavara emifananidzo yakafanana panguva imwe chete. Hapana ruvara runopera uye rwakasununguka kubata. Iyo inopindirana nemitemo yenyika yose yepasi rose uye inoshandisa inki dzekuchengetedza dzakasvibirira dzakasvibirira dzinosvika zvakakwana kusvika kune yepamusoro yeEurope yehutano hwekuongorora huwandu
Product Range : Inkjet Printer
Products / Service : Itafura yeVV yakafuridzirwa , T shirt Printer , Food Printer , Coffee Printer , Printer Cake , A3 UV Printer
Nheyo (Million US $) : US$20 Million
Gore rakasimbiswa : 2015
Address Address : 201-2, building 1, Anxu business park,No. 35-1 Xiangyin road, longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Avhareji Yeutungamiri Nguva : Peak season lead time:Within 15 workday
Annual Sales Volume (Mamiyoni US $) : US$10 Million - US$50 Million
Tumira Pakati : 51% - 60%
Imba yekutengesa uye yekutsvaga: Kudzingwa kunze nesangano
Nha. Yokugadzira Lines :3
Kwete yeC QC Staff :5 -10 People
OEM Services Rwakapiwa :yes